पर्यटन Archives - SindhuKhabar
कांग्रेसले जितेपछि पर्यटन क्षेत्रमा हेलम्बुमा के के भयो ?
हेलम्बु । हेलम्बुमा अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन २०७८ मा निमा ग्याल्जेल शेर्पा अध्यक्ष उठेका छन् । उनी २०७४ मा पनि हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनले पर्यटनलगायत शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै काम खगरेका छन् । १. देशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा – हिमालयन ग्रेट ट्रेल ( Himalayan Great Trail) । जसको लम्वाइ ६० किलोमिटर हुनेछ […]
काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले विद्युतीय कोरोबार झण्झटिलो भएको भन्दै पर्यटकलाई नगदै बोकेर आउन आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार विमानस्थल ओर्लिएपछि पाउने भिसा अर्थात् अनअराइभल भिसा लिने पर्यटकलाई भिसा शुल्क बुझाउन सजिलोका लागि भन्दै कार्यालयले २०० अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा बोकेर आउन आग्रह गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सफ्ट्वेयरले काम […]
अब नेपाल आउँदा पीसीआर रिपोर्ट वा खोप कार्ड देखाए पुग्ने
काठमाडौँ – कोभिड संकट रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई वर्ष अघिबाट नेपाल आगमनसम्बन्धी लागू गरिएका सबै प्रावधान खारेज गर्दै नयाँ ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गरिएको छ । अब विदेशबाट आउँदा कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट वा पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको कार्ड पेस गरे पुग्ने भएको छ । त्यस्तै विदेशबाट नेपाल आउँदा तोकिएको क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने प्रावधान पनि […]
हेलिकोप्टरमा गोसाइँकुण्ड जाने बढे
रसुवा, । रसुवाको उच्च भागमा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा हेलिकोप्टरबाट पुग्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । जिन्दगीमा एक पटक भए पनि पुग्नैपर्ने ठाउँका रुपमा गोसाइँकुण्डको धार्मिक महत्व छ । उकालो बाटो हिँड्दा कठिन हुनेभएकाले यात्रा सहजताको लागि पछिल्लो समय अधिकांश यात्रुले गोसाइँकुण्ड जान हेलिकोप्टर रोज्न थालेका हुन । स्थानीय होटल व्यवसायी हेलिकोप्टरमार्फत गोसाइँकुण्डको दर्शन गर्ने भक्तजनको सङ्ख्या […]
दोलखाको कालिञ्चोक मन्दिरमा निर्माण भएको केबलकारकाे उद्घाटन
दोलखा – दोलखाको कालिञ्चोक मन्दिरमा निर्माण भएको केबलकारकाे उद्घाटन गरिएकाे छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त केबलकारकाे आज उद्घाटन गरेका हुन् । मन्दिर दर्शन गर्न र मन्दिर छेउमा निर्माण भएको केबलकारको उद्घाटन गर्न ओली आज कालिञ्चोक आइपुगेका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई कालिञ्चोक गाउँपालिकाले धार्मीक तथा सांस्कृतिक तरिकाले स्वागत गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनकुमार थामीले जानकारी […]
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा भोटेचौर पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहमति
मेलम्ची । मेलम्ची नगरपालिकाको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको निर्माणाधीन ग्रिनसिटी उद्यान गत असार १ गते आएको मेलम्ची इन्द्रावती बाढीले बगाएपछि अहिले बगरमा परिणत भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी महानगरकै सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सो उद्यान बाढीले बगाएपछि अहिले उद्यानमा गर्ने लगानी महानगरले मेलम्ची–१ भोटेचौरको पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहमति प्रदान गरेको […]
कालीञ्चोक। दर्जनौँ हिमालका समिपमा रहेको कालीञ्चोक धार्मिक दृष्टिले मात्र नभई प्राकृतिकरुपमा पनि मनोरम छ । समुद्र सतहबाट तीन हजार ८४२ मिटरको उचाइमा रहेको दोलखा जिल्लाको कालीञ्चोकमा यतिबेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड बाक्लोे छ । केही समय अगाडि कालीञ्चोकसहित आसपासमा बाक्लो हिमपातका कारण यहाँ आउने सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । सोही कारण कुरी बजारले पर्यटक धान्नै […]
भोटेकोशी – सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख पर्यटकीयस्थल भैरवकुण्ड पदमार्गमा होमस्टेको सुरुआत गरिएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिका–३ स्थित यार्मासिङमा पर्यटन प्रवद्र्धनलक्षित होमस्टेको सुरुआत गरिएको हो। भैरवकुण्ड, दुगुनागढीलगायत पर्यटकीय स्थलमा घुम्न आउने पर्यटकको सुविधाका लागि स्थानीय आमा समूहले होमस्टे प्रवद्र्धन गरेका हुन्। यहाँ भूईंचालोअघि पनि यस्तो सेवा उपलब्ध थियो । भूईंचालोले घरहरु भत्काएपछि होृमस्टे सेवा टुटेको हो । पर्यटकीय गाउँ […]
कार्तिक १६ । सोलुखुम्वु जिल्लाको खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने खाङतेका हिमाल आरोहणमा गएका तीन फ्रान्सेली नागरिक बेपत्ता भएका छन् । उनीहरु ६ दिनदेखि बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्वुले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक कवित कटवालका अनुसार बेपत्ता हुनेमा फ्रान्सेली नागरिक थोमस, गाब्रियल र लुइस छन् । उनीहरु आठ जनाको समूहमा होलिडे हिमालय ट्रेक्स एण्ड […]